Ny “Post Break” nataon'i PNYA dia lasa any ambadiky ny seho miaraka amin'ny lozam-pifamoivoizana avy amin'ireo mpifaninana loka | NAB Show News | 2021 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny Media sy ny mpamokatra ny Kat Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Vaovao » Ny “Post Break” nataon'i PNYA dia lasa ambadiky ny seho an-tsehatra miaraka amin'ny Pro Pros avy amin'ireo mpifaninana loka
Ny “Post Break” nataon'i PNYA dia lasa ambadiky ny seho an-tsehatra miaraka amin'ny Pro Pros avy amin'ireo mpifaninana loka
Ny valan-dresaka ho an'ny horonantsary maimaim-poana dia natao ho an'ny alakamisy 8 aprilyth amin'ny 4:00 hariva EDT
NEW YORK CITY- Miaraka amin'ny vanim-potoanan'ny loka, Post Break, webinar maimaimpoana avy amin'ny Post New York Alliance (PNYA), hampiantrano ireo matihanina aorian'ny famokarana ao ambadiky ny sarimihetsika malaza indrindra amin'ity taona ity. Tahaka ny ahoana ny miasa amin'ny tetikasa iray izay miteraka buzz an'i Oscar? Fantatr'izy ireo hatramin'ny voalohany ve fa manokana ilay tetikasa? Inona no tombontsoa azo avy amin'ny fiaraha-miasa amin'ny sarimihetsika mandresy an Academy Award sa voninahitra ambony hafa?
Ity edisiôna Post Break manokana ity dia hisongadina amin'ny maha-panelista Rita Walsh, mpanatontosa mpamokatra / mpanara-maso ny famokarana Aza mahalasa foana indraindray, mpandresy amina loka famoronana 28, Skip Lievsay, mixer fandraketana amin'ny Ma Rainey's Black Ambany, olona voatendry ho an'ny Academy Award dimy, Francis Power, mpanara-maso aorian'ny famokarana Jodasy sy ilay Mesia mainty, voatendry ho an'ny Oscars enina, ary Blair McClendon, tonian-dahatsoratry ny Ilay Mpanampy, mpandresy amina mari-pankasitrahana fetibe efatra ary mari-pankasitrahana amin'ny Film New York Critics Award. Eli Lederberg dia ho antonony.
Voalahatra ny alakamisy 8 aprily ny fivorianath amin'ny 4:00 hariva EDT. Aorian'ny webinar, ny mpanatrika dia hanana fotoana hanatevin-daharana ireo vondrona fialantsasatra kely sy virtoaly hifanakalo hevitra sy tambajotra.
Rita Walsh dia mpamokatra nahazo mari-pankasitrahana ary manam-pahaizana manokana momba ny paositra izay nahazoana mari-pahaizana tato ho ato ny mpiara-mpamokatra amin'ny Kitty Green's Ilay Mpanampy, mpamokatra mpiara-miasa / mpanara-maso ao amin'ny Eliza Hittman's Aza mahalasa foana indraindray, ary mpamokatra ao amin'i Rodd Rathjen's Buoyancy. Izy no namokatra ny fety fankalazana an'i Jessica Leski Normal aho taloha: Tantaran'ny bandy fangirl ary mpanohana / mpanara-maso mpiara-miasa ao amin'ny Kitty Green's Netflix Original Casting Jonbenet. Izy koa dia manana mari-pamokarana ao amin'i Justin Kurzel's Famonoana olona tao Snowtown, Jane Campion's Bright Star, ary an'i Adam Elliot's Mary & Max ankoatry ny hafa avy any Aostralia nahaterahany. Nanomboka ny taona 2019 dia niasa teo anelanelan'i New York sy Melbourne izy.
Skip Lievsay dia iray amin'ireo teknisianina mahay indrindra eo amin'ny sehatry ny film ankehitriny izay niasa tamina horonantsary miisa 180 mahery. Izy dia 8-fotoana Academy Award-nominee ary nandresy ny Oscar tamin'ny 2014 ho an'ny Best Sound Mixing ho an'ny Gravity. Niara-niasa tamin'ny Rahalahy Coen tamin'ny sarimihetsika marobe izy, anisan'izany Ao anatin'ny Llewyn Davis, Tsy misy firenena ho an'ny anti-dahy ary Rà Tsotra. Anisan'izany ny naoty azony tamin'i Martin Scorsese Ny fakana fanahy farany an'i Kristy, GoodFellas, Vanim-potoana tsy fananan-tsiny ary Casino; ary miaraka amin'i Spike Lee dia ampidiro Ataovy ny tsara, Jungle Fever, Mo'Better Blues ary Crooklyn. Anisan'ireo bola hafa notanisaina ihany koa Grit marina, Ny fahanginan'ny zanak'ondry, Ny lokon'ny vola, Matewan, Trondro fatratra, Y tu Mama Tambien ary New World.
Francis Power dia nahazo diplaoma tao amin'ny Oniversiten'i Columbia izay nananany Andrew Sarris ho mpampianatra sy mpanolotsaina amin'ny famokarana. Nandritra izay 12 taona lasa izay dia niasa ho mpanara-maso aorian'ny famokarana momba ny seho, fandaharana amin'ny fahita lavitra amin'ny fahitalavitra sy fanadihadiana izy Jodasy sy ilay Mesia mainty, Very zazavavy ary Rolling Thunder Revue: Tantara Bob Dylan avy amin'i Martin Scorsese; ary amin'ny maha mpamokatra arisiva an'ny andian-tsarimihetsika Fran Lebowitz Netflix Mody mody tanàna io. Power dia mpanolotsaina ny Film Foundation, hitahiry sy hamerina amin'ny laoniny ny tantaran'ny sary mihetsika, ary The Harold Hunter Foundation, mba hanampiana ny tanora tsy ampy taona hahatsapa ny fahafaha-manaony feno sy hampiasa ny fahefan'ny skateboarding hanovana fiainana.
Blair McClendon dia tonian-dahatsoratra, mpanatontosa sarimihetsika, ary mpanoratra. Mpanoratra mpandray anjara ho an'ny laboratoara Sunset Documentary Edit and Story labs 2017 izy ary nandresy tamin'ny loka Sundance Short Film Jury ho an'ny fanovana miaraka amin'ny sarimihetsika LAPS. Ny asany dia naseho tamina Cannes, Tribeca, TIFF ary fety hafa manerantany. Vao tsy ela akory izay dia editor izy Ilay Mpanampy, izay premiered tao Telluride. Navoaka tamin'ny n + 1, The New Republic ary New York Times ny asa sorany.
Eli Lederberg dia nahazo diplaoma vao haingana tao amin'ny Parsons School of Design. Fony izy tany amin'ny oniversite dia nanana fiofanana amin'ny A24, MATTE Projects ary orinasa mpamokatra lahatsoratra any New York hafa izy. Mpanampy aorian'ny famokarana amin'ny andiany Amazon Studios izy izao Haavo ivelany.
Rahoviana: Alakamisy 8 aprily 2021, 4:00 hariva EDT
Title: Ary ny loka dia…
Azo jerena eto ny raki-peo noraisim-pivoriana natao tamin'ny Post Break: www.postnewyork.org/page/PNYAPodcasts
Azo jerena eto ny fanontana ny Past Post Break amin'ny endrika bilaogy video: www.postnewyork.org/blogpost/1859636/Post-Break
Momba ny Post New York Alliance (PNYA)
Ny Post New York Alliance (PNYA) dia fikambanan'ny fotodrafitrasa famokarana horonantsary sy fahitalavitra, sendika ary mpiasa matihanina miasa ao amin'ny New York State. Ny tanjon'ny PNYA dia ny hamorona asa amin'ny: 1) fanitarana sy fanatsarana ny New York State Tax Insent Program; 2) mandroso ny serivisy omen'ny indostrian'ny New York Post Production; ary 3) mamorona làlana ho an'ny talentan'ny talenta isan-karazany hiditra ao amin'ny The Industry.
Awards lahatsoratra famokarana webinars 2021-04-05
Previous: UPM / Mpanara-maso ny famokarana
Next: VFX Legion dia mamorona effets ho an'ny 'Half Brothers'